Ukuhlala elungele ukushintsha ukwenza kuhlenge ibhizinisi lakhe ngezikhathi zobunzima. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNksz uKgomotso Kgaswe, waseRustenburg, eNorth West, wumsunguli weWoke Motswana, ibhizinisi lemisiko yemfashini nezimpahla kobuhlalu. Uqale leli bhizinisi ngemali ayibeka esasebenza kwandabazabantu iminyaka ewu-15 embonini ezimele.
Uthi okwenza wagcina eqala ibhizinisi wukuthi uninakhulu wayewumthungi, loko kwenza naye wafisa ukuhamba ezinyathelweni zakhe. Uthi: “Ngisibone manje isidingo sokuthi kube nesitolo sezimpahla ezithungwayo emphakathini wabantu abamnyama.”
I-Woke Motswana ihlukaniseke kathathu ngo-2019; yenza imisiko yemfashini, idayise imikhiqizo yobuhlalu, imifaniswano yezinkampani ezahlukene, izikhwama nezimpahla zesintu. Uthi konke loku akakwenzanga kalula ngenxa yenkinga yemali esaqala.
Ezinye zezimpahla ezenziwa yiWoke Motswana
“Izinkampani ezibolekisa ngemali bezifuna ukubona isitatimende sasebhange esifakazela ukuthi sengibe nebhizinisi iminyaka emibili, obekungelula ukuthi ngizinike ngoba bengisanda kuqala ibhizinisi,” kulanda yena.
Uthi nokubheduka kweCOVID-19 esikhaleni kwaqongisa izinkinga zakhe. Uthi: “Kwakunzima ukumelana nezindleko zokuqhuba ibhizinisi, ngagcina ngiphoqeka ukuthi ngilivale ibhizinisi. Ngibe ngicabanga ukuthi ngingabuya kanjani ngamandla.”
Ube esefikelwa wumqondo wokuthi aziyele mathupha emakhasimendeni awadayisele imikhiqizo yakhe. Uthi ukufika kweCOVID-19 kwenze wafunda okuningi njengokuthi kufanele uhlale unecebo lesibili elizosiza uma ubhekana nobunzima ebhizinisini.
Amaxhumelo nesikhwama okugqize ngesiNtu kweWoke Motswana
Ukhuthaze abanye osomabhizinisi ukuthi balandele yonke imigudu yokuphatha ibhizinisi, athi isiza kakhulu uma usufaka izicelo zokuxhaswa nokunye okungasiza ukuchumisa ibhizinisi.
“Ngingathanda ukuzibona senginendawo enkulu yokusebenzela, lapho engizoqasha khona intsha yangasekhaya ukuze nayo ikwazi ukuthola amava ezowasebenzisa ukuthola amathuba angcono,” kuphetha uNksz uKgaswi.
Facebook: Woke Materials/Kgomotso Kgaswe